Ferrous (2018) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားကတော့ အိန္ဒိယ မှုခင်းဒရမ်မာကို အသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ လားဂို့စ်တွင် ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်အဖြစ် အကဲဖြတ်ခံရသော ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ရဲအုပ်ကြီးက အမှုတွေကို ဘယ်လိုလာဘ်စားပြီး သမီးရည်းစား နှစ်ဦးမှာလည်း ကောင်လေးက ဘယ်လိုအစီစဉ်နဲ့ကောင်မလေးကို ချဉ်းကပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှု့ရမှာ ဖြစ်သလို တက္ကဆီယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်က ဘယ်လိုတာဝန်တွေလုပ်ဆောင်နေရလဲဆိုတာ ပဟေဠိဆန်စွာနဲ့ရှု့စားရမှာဖြစ်လို့ လက်မလွတ်တမ်းအားပေးသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်လို့ ကြည့်ရှု့အားပေးကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော် .... ##zawgyi အခုတင္ဆက္​ေပးမယ့္ဇာတ္ကား​ကေတာ့ အိႏိၵယ မႈခင္းဒရမ္မာကို အသား​ေပး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကား​ေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ လားဂို႔စ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲ​​ေတာ္တစ္ခုတြင္ အ​ေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ အကဲျဖတ္ခံရ​ေသာ ဇာတ္ကား​ေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့ ရဲအုပ္ႀကီးက အမႈ​ေတြကို ဘယ္လိုလာဘ္စားၿပီး ​သမီးရည္းစား ႏွစ္ဦးမွာလည္း ​ေကာင္​ေလးက ဘယ္လိုအစီစဥ္နဲ႔​ေကာင္မ​ေလးကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစြာၾကည့္ရႈ႕ရမွာ ျဖစ္သလို တကၠဆီယာဥ္​ေမာင္းတစ္​ေယာက္က ဘယ္လိုတာ၀န္​ေတြလုပ္​ေဆာင္​ေနရလဲဆိုတာ ပ​ေဟဠိဆန္စြာနဲ႔ရႈ႕စားရမွာျဖစ္လို႔ လက္မလြတ္တမ္းအား​ေပးသင့္တဲ့ ဇာတ္ကား​ေကာင္း​ေလးတစ္​ကားျဖစ္လို႔ ၾကည့္ရႈ႕အား​ေပးၾကပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရ​ေစ​ေနာ္ .... Review – Thuzar File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre ...
Genius (2018) (App member only) ##unicode အိန္ဒိယအက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းကားပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Genius ဆိုတဲ့အက်ရှင်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့အထူးအေးဂျင့်ဗာဆူဒက်တစ်ယောက်ဟာမစ်ရှင်တစ်ခုအတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီး အရည်အချင်းမပြည့်မီဘူးဟုသတ်မှတ်ပြီးအလုပ်ကနေတာဝန်ရပ်စဲခံလိုက်ရတာနဲ့စတင်ထားပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးပြောပြထားပါတယ် ဗာဆူဒက်ရှာစရီဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းကမိဘတွေဆုံးပါးသွားပြီးဘုရားကျောင်းမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဗာဆူဒက်မှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဉာဏ်အလွန်ကောင်းတာပါ ကွန်ပျူတာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံ့လူကြီးတွေရဲအရာရှိတွေကတောင် သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခိုင်းနေကြပါ တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အရွယ်ကတည်းကအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ထဲကိုဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာပါ ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးရှင်လို့လူတကာကသတ်မှတ်ထားကြတဲ့ဗာဆူဒက်တစ်ယောက်ဘာကြောင့်မစ်ရှင်ကိုကျဆုံးခဲ့ရတာလဲ သူ့ကိုမသန်စွမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလက်စားချေသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အိႏၵိယအက္ရွင္ဇာတ္ၾကမ္းကားပရိသတ္ေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေလာက္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Genius ဆိုတဲ့အက္ရွင္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအစမွာေတာ့အထူးေအးဂ်င့္ဗာဆူဒက္တစ္ေယာက္ဟာမစ္ရွင္တစ္ခုအတြင္းမွာျပင္းထန္တဲ့ဒဏ္ရာရရွိသြားတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းကေနၿပီး အရည္အခ်င္းမျပည့္မီဘူးဟုသတ္မွတ္ၿပီးအလုပ္ကေနတာဝန္ရပ္စဲခံလိုက္ရတာနဲ႔စတင္ထားပါတယ္ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့သူ႔ရဲ႕ဘဝေနာက္ေၾကာင္းကိုျပန္ၿပီးေျပာျပထားပါတယ္ ဗာဆူဒက္ရွာစရီဟာငယ္ငယ္ေလးကတည္းကမိဘေတြဆုံးပါးသြားၿပီးဘုရားေက်ာင္းမွာပဲ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ဗာဆူဒက္မွာထူးျခားတဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ဉာဏ္အလြန္ေကာင္းတာပါ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအထူးကြၽမ္းက်င္လို႔ႏိုင္ငံ့လူႀကီးေတြရဲအရာရွိေတြကေတာင္ သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းခိုင္းေနၾကပါ တကၠသိုလ္တက္ေနတဲ့အ႐ြယ္ကတည္းကအထူးစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ထဲကိုဝင္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရတာပါ ဒါဆိုရင္ဉာဏ္ႀကီးရွင္လို႔လူတကာကသတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ဗာဆူဒက္တစ္ေယာက္ဘာေၾကာင့္မစ္ရွင္ကိုက်ဆုံးခဲ့ရတာလဲ သူ႔ကိုမသန္စြမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြကိုဘယ္လိုလက္စားေခ်သြားမလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Drama,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 6.0/10 2,773 votes
Gravity of Love (2018) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာ Gravity of love ဆိုတဲ့ ထိုင်းအချစ်ဟာသကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ပါးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးဟာ ရည်းစားသုံးယောက်နဲ့ပြတ်စဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ကံကြမ္မာဆိုတာကို မယုံကြည်တော့တဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဘဝမှာ ပိုင်းလော့" တေး"ရယ် ၊ "ဇန်"ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရယ် ပါဝင်ပတ်သတ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ပါး ကို ချစ်မိခဲ့ကြပေမဲ့..... ပါးက ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်မလဲ..... မယုံကြည်တော့တဲ့ ကံကြမ္မာဆိုတာကိုရော ပြန်လည်ယုံကြည်လာမှာလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာ Gravity of love ဆိုတဲ့ ထိုင္းအခ်စ္ဟာသကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ ပါးဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးဟာ ရည္းစားသုံးေယာက္နဲ႔ျပတ္စဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကံၾကမၼာဆိုတာကို မယုံၾကည္ေတာ့တဲ့သူျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ဘဝမွာ ပိုင္းေလာ့" ေတး"ရယ္ ၊ "ဇန္"ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရယ္ ပါဝင္ပတ္သတ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ပါး ကို ခ်စ္မိခဲ့ၾကေပမဲ့..... ပါးက ဘယ္သူ႔ကိုေ႐ြးခ်ယ္မလဲ..... မယုံၾကည္ေတာ့တဲ့ ကံၾကမၼာဆိုတာကိုေရာ ျပန္လည္ယုံၾကည္လာမွာလား ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္ Review – KKK File Size – 1.6GB Format…mp4 Quality : 1080p ...
Chumbak (2021) (App only) ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဇာတ်လမ်းကတော့ အိန္ဒိယက မွန်ဘိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ Baalu က အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ရွာကလာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ သူက အဖေမရှိဘဲ အမေနဲ့လဲ မနီးကပ်တဲ့ကလေးပါ ဒါပေမဲ့ သူက ကြီးပွားပြီးအောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ် ရွာမှာ ဆိုင်ဖွင့်ချင်တဲ့အိပ်မက်အမြဲရှိပြီး အလုပ်လုက်ရင်း ငွေစုနေတာပါ ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက် ရွာက ဥိးလေးက ဖုန်းဆက်လာပါတယ် သူ့ဖွင့်ချင်တဲ့ဆိုင်လေး နေရာက ရသွားပြီဖြစ်ပြီး ငွေချက်ချင်းလိုတဲ့အကြောင်း လှမ်းပြောပါတယ် ငွေများများပိုပေးဖို့ လိုတဲ့လို့ပါ Baalu မှာရှိတဲ့ငွေထက် ၂ဆဖြစ်နေတဲ့အခါ ငွေမြှုပ်နှံပြီး များများပြန်ရမဲ့ထဲကို ဝင်ပါမိသွားပါတယ် အလိမ်ခံလိုက်ရပြီး ငွေတွေဆုံးတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုင်အတွက် ဘယ်လိုငွေပေးမလဲ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုရှာမလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဥိးမလဲ သူ့ဆိုင်ရော ရပါ့မလား ဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ ##zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ဇာတ္လမ္းကေတာ့ အိႏၵိယက မြန္ဘိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းပါ Baalu က အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ႐ြာကလာတဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ပါ သူက အေဖမရွိဘဲ အေမနဲ႔လဲ မနီးကပ္တဲ့ကေလးပါ ဒါေပမဲ့ သူက ႀကီးပြားၿပီးေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိပါတယ္ ႐ြာမွာ ဆိုင္ဖြင့္ခ်င္တဲ့အိပ္မက္အၿမဲရွိၿပီး အလုပ္လုက္ရင္း ေငြစုေနတာပါ ...
IMDB: 8.8/10 105 votes
Boonie Bears: The Big Shrink (2018) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အားလုံးလည်းစိတ်အပန်းပြေသွားအောင်ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗစ်တာဟာငယ်စဉ်တုန်းကတော့ အဖေဖြစ်သူနဲ့အရမ်းကိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမယ့် အဖေဖြစ်သူအလုပ်များလာပြီးတဲ့နောက်မှာ တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာခဲ့တာ ကြီးတဲ့အထိဖြစ်ပါတော့တယ် ဗစ်တာဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ မိဘတွေနဲ့ခွဲနေပြီး ဝါသနာပါတဲ့ပစ္စည်းအသစ်တွေတီထွင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ ဗစ်တာတစ်ယောက်သူထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ပဲ မတော်တဆခန္တာကိုယ်သေးသေးလေးဖြစ်သွားပါတော့တယ် ဗစ်တာနဲ့ဝက်ဝံကြီးနှစ်ကောင်လည်း အတူသေးငယ်သွားပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဗစ်တာတို့မူလခန္တာကိုယ်အရွယ်အစားပြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားရပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ခန္တာကိုယ်သေးသေးလေးနဲ့ဗစ်တာတို့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်ဘဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရပါတော့တယ် ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီးပုံမှန်အရွယ်အစားကို ပြန်ရောက်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အားလုံးလည္းစိတ္အပန္းေျပသြားေအာင္ကာတြန္းကားေလးတစ္ကားကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဗစ္တာဟာငယ္စဥ္တုန္းကေတာ့ အေဖျဖစ္သူနဲ႔အရမ္းကိုရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ေပမယ့္ အေဖျဖစ္သူအလုပ္မ်ားလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တျဖည္းျဖည္းေဝးကြာလာခဲ့တာ ႀကီးတဲ့အထိျဖစ္ပါေတာ့တယ္ ဗစ္တာဟာ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ မိဘေတြနဲ႔ခြဲေနၿပီး ဝါသနာပါတဲ့ပစၥည္းအသစ္ေတြတီထြင္တဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ပါတယ္ တစ္ရက္မွာေတာ့ ဗစ္တာတစ္ေယာက္သူထြင္ထားတဲ့ပစၥည္းေၾကာင့္ပဲ မေတာ္တဆခႏၲာကိုယ္ေသးေသးေလးျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္ ဗစ္တာနဲ႔ဝက္ဝံႀကီးႏွစ္ေကာင္လည္း အတူေသးငယ္သြားပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ဗစ္တာတို႔မူလခႏၲာကိုယ္အ႐ြယ္အစားျပန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ခႏၲာကိုယ္ေသးေသးေလးနဲ႔ဗစ္တာတို႔စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါႏိုင္ဘဲ အခက္အခဲေတြနဲ႔ႀကဳံရပါေတာ့တယ္ ဒီအခက္အခဲေတြကိုေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ၿပီးပုံမွန္အ႐ြယ္အစားကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size –1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Animation,Aventure Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Congo (2018) (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဆုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Congoနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားဆန်မှုအကင်းမဲ့ဆုံးနိုင်ငံလို့ UNကသတ်မှတ်ထားပြီး နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ရူပ်ထွေးလှတဲ့နိုင်ငံပါ အဲဒီနိုင်ငံကို နော်ဝေးနိုင်ငံသား စစ်သားဟောင်းနှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့ဟာ Congoနိုင်ငံအစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေသူ သူပုန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့ မစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးစွာနဲ့ ခရီးစဉ်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ် သူတို့ရဲ့အငှားယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ Congoနိုင်ငံသားသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်ကို Congoစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် လျို့ဝှက်မစ်ရှင်ကိုမပြောပြနိုင်တာကြောင့် သူတို့မသတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းမပြောပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ လူသတ်တရားခံတွေအဖြစ်စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမှုဟာ နိုင်ငံရေးအရရူပ်ထွေးမှုတွေပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် စစ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုအေျခခံထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ၿပီး႐ုပ္ရွင္ဆုေပါင္းမ်ားစြာကိုရရွိခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ Congoႏိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ လူသားဆန္မႈအကင္းမဲ့ဆုံးႏိုင္ငံလို႔ UNကသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔႐ူပ္ေထြးလွတဲ့ႏိုင္ငံပါ အဲဒီႏိုင္ငံကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံသား စစ္သားေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ သူတို႔ဟာ Congoႏိုင္ငံအစိုးရကိုဆန႔္က်င္ေနသူ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ေစခိုင္းမႈနဲ႔ မစ္ရွင္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ေရာက္လာခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ ကံဆိုးစြာနဲ႔ ခရီးစဥ္မွာတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္ သူတို႔ရဲ႕အငွားယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ Congoႏိုင္ငံသားေသဆုံးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို Congoစစ္တပ္ကဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္ လ်ိဳ႕ဝွက္မစ္ရွင္ကိုမေျပာျပႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔မသတ္ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အမွန္တရားကိုလည္းမေျပာျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ႔ လူသတ္တရားခံေတြအျဖစ္စြပ္စြဲခံခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ႐ူပ္ေထြးမႈေတြပါျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ စစ္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာအႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္လို႔တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review –Hmue File Size – 2.4GB,1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Action,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded ...
Chal Mohan Ranga (2018) (App member only) ##umicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယအချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှာ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်သွေးသံရဲရဲနဲ့ ဆေးရုံကို ရောက်လာရာကနေအစပျိုးထားပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြောပြထားပါတယ် မိုဟန်ရာဂျာဟာငယ်ငယ်ကသူသဘောကျတဲ့ကောင်မလေး အမေရိကားကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူလည်းအမေရိကားကိုသွားပြီးအောင်မြင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် မိုဟန်ဟာကျောင်းကောင်းကဆင်းပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့သူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့အိပ်မက်နဲ့အလှမ်းဝေးနေခဲ့တာပေါ့ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေရိကားသွားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီး အဲ့ဒီမှာပဲ မေဂါဆူဘရာမာနီရန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းအကျင့်စာရိုက်ချင်းမတူတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲကွာခဲ့ရပြန်ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းဟာ ဒီမှာပဲတကယ်အဆုံးသတ်သွားပြီလား ဘယ်လိုလုပ်အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံကိုအတူရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့အိႏၵိယအခ်စ္ဟာသဇာတ္လမ္းေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအစပိုင္းမွာ အက္စီးဒင့္ျဖစ္ၿပီးေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ ေဆး႐ုံကို ေရာက္လာရာကေနအစပ်ိဳးထားပါတယ္ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္လိုေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာျပထားပါတယ္ မိုဟန္ရာဂ်ာဟာငယ္ငယ္ကသူသေဘာက်တဲ့ေကာင္မေလး အေမရိကားကိုထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူလည္းအေမရိကားကိုသြားၿပီးေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္ မိုဟန္ဟာေက်ာင္းေကာင္းကဆင္းၿပီး အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရတဲ့သူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕အိပ္မက္နဲ႔အလွမ္းေဝးေနခဲ့တာေပါ့ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့အေမရိကားသြားႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရးေပၚလာၿပီး အဲ့ဒီမွာပဲ ေမဂါဆူဘရာမာနီရန္ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္လည္းအက်င့္စာ႐ိုက္ခ်င္းမတူတဲ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကြဲကြာခဲ့ရျပန္ပါတယ္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ခရီးလမ္းဟာ ဒီမွာပဲတကယ္အဆုံးသတ္သြားၿပီလား ဘယ္လိုလုပ္အက္စီးဒင့္ျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ုံကိုအတူေရာက္လာတာလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Drama.Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================= ========================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Qismat (2018) (App member only) ##umicode Qismatဇာတ်လမ်းကတော့ Netflixကရိုက်ကူးတဲ့ Romance/Dramaကားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Shivaဟာ ကောလိပ်ဖိုင်နယ်စာမေးပွဲခဏခဏကျနေတာကြောင့် မြို့ကိုစာမေးပွဲထပ်ဖြေဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဌားနေတဲ့ အိမ်ဘေးမှာနေတဲ့ Barniဆိုတဲ့မိန်းမချောလေးကိုမြင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့တယ်။ Barni ကတော့ ရည်းစားဖောက်ပြန်တာခံထားရတဲ့အတွက် ယောကျာ်းတွေကိုမယုံမကြည်ဖြစ်နေသူဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုဖောက်ပြန်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို သဝန်တိုအောင်လုပ်ဖို့အတွက် Shivaကိုရည်းစားအဖြစ်‌ဟန်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ Shivaနဲ့Barniတို့နှစ်ယောက်ရည်းစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်နေရင်းနဲ့ တကယ်တမ်းချစ်မိသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Shivaမှာလဲမွေးရပ်မြေမှာ လက်ထပ်ဖို့မိဘတွေစီစဉ်ပေးထားတဲ့ Amandဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီးတော့ Barniကိုလဲ သူ့မအဖေက လက်ထပ်ဖို့သတို့သားလောင်းရှာထားပြီးနေသောအခါ Shivaနဲ့ Barniတို့နှစ်ယောက် အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီး အတူတူပေါင်းဖက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို Qismat ဆိုတဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Qismatဇာတ္လမ္းကေတာ့ Netflixက႐ိုက္ကူးတဲ့ Romance/Dramaကားေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Shivaဟာ ေကာလိပ္ဖိုင္နယ္စာေမးပြဲခဏခဏက်ေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကိုစာေမးပြဲထပ္ေျဖဖို႔ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူဌားေနတဲ့ အိမ္ေဘးမွာေနတဲ့ Barniဆိုတဲ့မိန္းမေခ်ာေလးကိုျမင္ျမင္ခ်င္းစိတ္ဝင္စားသြားခဲ့တယ္။ Barni ကေတာ့ ရည္းစားေဖာက္ျပန္တာခံထားရတဲ့အတြက္ ေယာက်ာ္းေတြကိုမယုံမၾကည္ျဖစ္ေနသူျဖစ္တယ္။ သူ႔ကိုေဖာက္ျပန္သြားတဲ့ ရည္းစားေဟာင္းကို သဝန္တိုေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ Shivaကိုရည္းစားအျဖစ္‌ဟန္ေဆာင္ခိုင္းခဲ့တယ္။ Shivaနဲ႔Barniတို႔ႏွစ္ေယာက္ရည္းစားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ေနရင္းနဲ႔ တကယ္တမ္းခ်စ္မိသြားခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ Shivaမွာလဲေမြးရပ္ေျမမွာ လက္ထပ္ဖို႔မိဘေတြစီစဥ္ေပးထားတဲ့ Amandဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရွိေနၿပီးေတာ့ Barniကိုလဲ သူ႔မအေဖက လက္ထပ္ဖို႔သတို႔သားေလာင္းရွာထားၿပီးေနေသာအခါ Shivaနဲ႔ Barniတို႔ႏွစ္ေယာက္ အခက္အခဲေတြကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အတူတူေပါင္းဖက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို Qismat ဆိုတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္ကားေကာင္းမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : ...
IMDB: 8.4/10 2,531 votes
Saheb, Biwi Aur Gangster3(App member only) ##umicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Gangster အပိုင်း ၃အနေနဲ့ ထပ်ပ်ြီးရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူ အာဒစ်ရာပရာတပ်ဆင်းက ထောင်ထဲရောက်နေပြီး၊ ဒုတိယမိန်းမဖြစ်သူ ရန်ဂျနာကအရက်ကိုစွဲလန်းနေတဲ့အတွက် မတ်ဟီဒေဝီအဖို့ ရှိသမျှ အာဏာစည်းစိမ်အားလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး အာဏာယစ်မူးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အာဏာစည်းစိမ်ကိုပြန်လုမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မကြာခင်ထောင်ထဲကနေ လွတ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ မတ်ဟီအတွက်ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ နောက်ထပ် တော်ဝင်မျိုးနွယ်က မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အူဒေးလည်းပါဝင်လာမှာပါ။ နဂိုကတည်းက မြွေဟောက်လိုလျှာနှစ်ခွနဲ့မိန်းမမတ်ဟီဟာ သူ့ယောကျာ်းနဲ့ မင်းသားအသစ်အူဒေးနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေဆင်မလဲ၊ အာဒစ်ရာကရော သူ့ရဲ့အာဏာတွေ ဂုဏ်သိက္ခာတွေပြန်ရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ၊ အူဒေးကရော သူတို့ဇာတ်လမ်းတွေကြားမှာ ဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတဲ့ သပွတ်အူလိုက်နေတဲ့ဇာတ်ရှုပ်ထုတ်ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးခံစားရမှာပါ။ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူ Chris ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Gangster အပိုင္း ၃အေနနဲ႔ ထပ္ပ္ျီးေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ အာဒစ္ရာပရာတပ္ဆင္းက ေထာင္ထဲေရာက္ေနၿပီး၊ ဒုတိယမိန္းမျဖစ္သူ ရန္ဂ်နာကအရက္ကိုစြဲလန္းေနတဲ့အတြက္ မတ္ဟီေဒဝီအဖို႔ ရွိသမွ် အာဏာစည္းစိမ္အားလုံးကို သိမ္းပိုက္ၿပီး အာဏာယစ္မူးေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕အာဏာစည္းစိမ္ကိုျပန္လုမယ့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက မၾကာခင္ေထာင္ထဲကေန လြတ္လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ မတ္ဟီအတြက္ေခါင္းကိုက္စရာကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္က မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အူေဒးလည္းပါဝင္လာမွာပါ။ နဂိုကတည္းက ေႁမြေဟာက္လိုလွ်ာႏွစ္ခြနဲ႔မိန္းမမတ္ဟီဟာ သူ႔ေယာက်ာ္းနဲ႔ မင္းသားအသစ္အူေဒးႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဘယ္လိုဇာတ္လမ္းေတြဆင္မလဲ၊ အာဒစ္ရာကေရာ သူ႔ရဲ႕အာဏာေတြ ဂုဏ္သိကၡာေတြျပန္ရေအာင္ဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲ၊ အူေဒးကေရာ ...
IMDB: 4.4/10 767 votes
Mulshi Pattern (2018) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၈ လောက်တုန်းကထွက်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယ Crime Drama ကားလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ခေတ်ကြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့နောက်ရွာငယ်လေးတွေပျောက်ဆုံးပြီး သူတို့နေရာမှာမြို့ကြီးပြကြီးတွေတိုက်တာကြီးတွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ် လယ်သမားတွေကလည်း သူတို့လယ်မြေတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူတဲ့အခါပိုက်ဆံကိုမက်မောပြီးရောင်းချကြတယ် အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာရာဟူးလ်ရဲ့အဖေ ဆာကရမ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ် ဘယ်လောက်ပဲမီလီယံနဲ့ချီပြီးပေးတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဘဝလုံးလယ်ပဲစိုက်စားခဲ့တဲ့လယ်သမားတွေဟာ တကယ်တမ်းတော့လယ်မြေတွေမရှိတဲ့အခါအဆင်မပြေပါဘူး ပိုက်ဆံတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်ပြီး လယ်သမားအများစုဒုက္ခရောက်ကြတာကများပါတယ် ရာဟူးလ်ကတော့ လယ်တွေကိုရောင်းလိုက်တဲ့သူ့အဖေကိုမုန်းတီးပြီး အမြဲတမ်းချမ်းသာဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့သူပါ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ရာဟူးလ်တစ်ယောက်လမ်းမှားကိုရောက်ပြီးလူမိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ် ရာဟူးလ်တစ်ယောက်သူအမြဲတမ်းတောင့်တခဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရနိုင်ပါ့မလား သူ့ဘဝအဆုံးသတ်ကရောလှနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၈ ေလာက္တုန္းကထြက္ရွိတဲ့ အိႏၵိယ Crime Drama ကားေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေခတ္ႀကီးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ေနာက္႐ြာငယ္ေလးေတြေပ်ာက္ဆုံးၿပီး သူတို႔ေနရာမွာၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြတိုက္တာႀကီးေတြက အစားထိုးဝင္ေရာက္လာပါတယ္ လယ္သမားေတြကလည္း သူတို႔လယ္ေျမေတြကိုေဈးႀကီးေပးၿပီးဝယ္ယူတဲ့အခါပိုက္ဆံကိုမက္ေမာၿပီးေရာင္းခ်ၾကတယ္ အဲ့ဒီလူေတြထဲမွာရာဟူးလ္ရဲ႕အေဖ ဆာကရမ္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္တယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲမီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီးေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ဘဝလုံးလယ္ပဲစိုက္စားခဲ့တဲ့လယ္သမားေတြဟာ တကယ္တမ္းေတာ့လယ္ေျမေတြမရွိတဲ့အခါအဆင္မေျပပါဘူး ပိုက္ဆံေတြလည္းတျဖည္းျဖည္းကုန္ၿပီး လယ္သမားအမ်ားစုဒုကၡေရာက္ၾကတာကမ်ားပါတယ္ ရာဟူးလ္ကေတာ့ လယ္ေတြကိုေရာင္းလိုက္တဲ့သူ႔အေဖကိုမုန္းတီးၿပီး အၿမဲတမ္းခ်မ္းသာဖို႔ပဲစဥ္းစားေနတဲ့သူပါ ဒီလိုနဲ႔ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ရာဟူးလ္တစ္ေယာက္လမ္းမွားကိုေရာက္ၿပီးလူမိုက္တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္ ရာဟူးလ္တစ္ေယာက္သူအၿမဲတမ္းေတာင့္တခဲ့တဲ့ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကိုရႏိုင္ပါ့မလား သူ႔ဘဝအဆုံးသတ္ကေရာလွႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber ...
IMDB: 8.2/10 1,010 votes
Troll: The Tale ofaTail (2018) (App member only) ##unicode ဒီကားကတော့ မှင်စာ‌လေးထရမ်နဲ့ သူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အက်ဗော့မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ မှင်စာလေးတွေဟာ နေဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြပါဘူး ဒါကြောင့် ဘုရင်မြှောက်ဖို့‌ရွေးရာမှာ နေဒဏ်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးရွေးလေ့ရှိပါတယ် ထရမ်ရဲ့အဖေ ဘုရင်ကြီးထရွှန်ကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာအမြဲအနိုင်ရပြီး ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ ထရမ်ကတော့ သူ့အဖေလိုမျိုးဖြစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ ကောင်လေးပါ တစ်နေ့မှာတော့ ဘုရင်ကြီးထရွှန်ကို ပြိုင်ပွဲမှာရူံးနိမ့်နေကျ ဂရင်မာဆိုတဲ့မှင်စာက အကောက်ကြံပြီး ထရမ်ကို တားမြစ်တောအုပ်ထဲကို လိမ်ညာကာလွှတ်ခဲ့ပါတယ် သားကိုကယ်ဖို့သွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးထရွှန်က နေဒဏ်နဲ့ထိပြီး ကျောက်တုံးအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အခါ အဖေကိုကယ်တင်ဖို့စွန့်စားခန်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ မှင်စာလေးထရမ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းကို ဒီကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူအားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ကြည့်ပျော်မဲ့ဇာတ်ကားကောင်း‌လေးဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ##zawgyi ဒီကားကေတာ့ မွင္စာ‌ေလးထရမ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕စြန႔္စားခန္းအေၾကာင္း႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ကာတြန္းဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ အက္ေဗာ့ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ၾကတဲ့ မွင္စာေလးေတြဟာ ေနဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ၾကပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္ေျမႇာက္ဖို႔‌ေ႐ြးရာမွာ ေနဒဏ္ကလြတ္ေအာင္ေျပးႏိုင္တဲ့ အေျပးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပၿပီးေ႐ြးေလ့ရွိပါတယ္ ထရမ္ရဲ႕အေဖ ဘုရင္ႀကီးထ႐ႊန္ကေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာအၿမဲအႏိုင္ရၿပီး ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ ထရမ္ကေတာ့ သူ႔အေဖလိုမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနတဲ့ ေကာင္ေလးပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဘုရင္ႀကီးထ႐ႊန္ကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ႐ူံးနိမ့္ေနက် ဂရင္မာဆိုတဲ့မွင္စာက အေကာက္ႀကံၿပီး ထရမ္ကို တားျမစ္ေတာအုပ္ထဲကို လိမ္ညာကာလႊတ္ခဲ့ပါတယ္ သားကိုကယ္ဖို႔သြားတဲ့ ဘုရင္ႀကီးထ႐ႊန္က ေနဒဏ္နဲ႔ထိၿပီး ေက်ာက္တုံးအျဖစ္ေျပာင္းသြားခဲ့တဲ့အခါ အေဖကိုကယ္တင္ဖို႔စြန႔္စားခန္းဖြင့္ခဲ့တဲ့ မွင္စာေလးထရမ္ရဲ႕စိတ္၀င္စားစရာဇာတ္လမ္းကို ဒီကားမွာ ဆက္လက္ၾကည့္႐ူအားေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔ၾကည့္ေပ်ာ္မဲ့ဇာတ္ကားေကာင္း‌ေလးျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ Review – Hmue File Size ...
The Blood of Wolves (2018) (App member only) ##unicode The Last of the wolvesကို ရှေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့စဉ်က ၂၀၁၈ခုနှစ်က ပထမဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ The blood of the wolves အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် အခု ရုပ်ရှင်ဆုတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီဇာတ်ကားကို အားလုံးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ဟီအိုကာက စုံထောက်ပေါက်စလေးအဖြစ် စုံထောက် အိုဂါမီရဲ့ပါတနာဖြစ်ခဲ့တာပါ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဂိုဏ်းရန်ပွဲတွေ အစပျိုးနေတဲ့ကာလမှာ ဂိုဏ်းလက်အောက်ခံငွေကြေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက မန်နေဂျာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ဒါဟာ ဂိုဏ်းရန်ပွဲတွေကို ပိုမိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် အိုဂါမီက အမှုကိုစုံစမ်းရင်း ရန်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက် ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ် အိုဂါမီက ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ယာကူဇာတွေနဲ့ပက်သက်မှုရှိတယ် သူတို့လိုကြမ်းတမ်းတယ် ရဲတစ်ယောက်လိုမနေတတ်တဲ့လူဖြစ်လို့ ဟီအိုကာက သူ့ဆရာကို အမြဲသံသယဝင်နေခဲ့ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာ ဟီအိုကာနဲ့ အိုဂါမီရဲ့ပက်သက်မှုအစကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဂိုဏ်းအချင်းချင်းရန်ပွဲတွေကို အိုဂါမီ ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ ယာကူဇာတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရမဲ့ ဇာတ်ကြမ်းကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi The Last of the wolvesကို ေရွ႕မွာတင္ဆက္ေပးခဲ့စဥ္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္က ပထမဆုံးထြက္ခဲ့တဲ့ The blood of the wolves ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္ အခု ႐ုပ္ရွင္ဆုေတြသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ...
IMDB: 6.9/10 860 votes
The Mystical Treasure (2018) (App Premium only) ##unicode Ge Zhen ဟာ Twelve Shadow Guards ဆိုတဲ့ Baimen Five Martial Arts တို့ကို တတ်မြောက်တဲ့ ဆရာ Weiyang ရဲ့ တပည့်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် Baersi ဆိုသူကတော့ Ge Zhen နဲ့ဆရာတူတပည့်ဖြစ်ပါတယ် သူက ထာဝရရှင်သန်ခြင်းနှင့်အဆုံးမရှိတဲ့ စွမ်းအင်တို့ရရှိနိုင်တဲ့ Mystical Treasure ကိုတွေ့ရှိကာ ဆရာဖြစ်သူအပါအဝင်အရာအားလုံးကိုသစ္စာဖောက်ပြီး တစ်ကိုယ်တည်းအုပ်စိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ Mystical treasure က အသုံးမချတတ်ရင် အသုံးပြုသူကိုပြန်တိုက်ခိုက်တတ်ပြီး ထိခိုက်မှူတွေ အသိစိတ်ပျောက်အောင်ထိ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ် Baersi ကို Ge Zhen က ဆရာဖြစ်သူနဲ့အတူ နှိမ်နင်းဖို့ကြိုးစားရင်း တခြားအနှောင့်အယှက်တွေရော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လမ်းကို ရွေးချယ်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါရှင် ##zawgyi Ge Zhen ဟာ Twelve Shadow Guards ဆိုတဲ့ Baimen Five Martial Arts တို႔ကို တတ္ေျမာက္တဲ့ ဆရာ Weiyang ...
IMDB: 3.6/105votes
Jim Button and Luke the Engine Driver (2018) ##(app member only) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဂျာမန်ကလေးပုံပြင်ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ adventureဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် လိုမာကျွန်းဆိုတဲ့ ကျွန်းအသေးလေးကို သေတ္တာတစ်လုံး မှားပို့ခဲ့မိပါတယ် ထိုသေတ္တာထဲမှာတော့ ကလေးတစ်ယောက်ပါလာခဲ့ပါတယ် သူ့နာမည်ကို ဂျင်လို့ပေးခဲ့ကြပြီး ဂျင်ဟာ ကျွန်းပေါ်မှာပဲကြီးလာခဲ့ပါတယ် လိုမာကျွန်းက အင်မတန်ကိုသေးလှတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျင် အရွယ်ကြီးလာရင် နေစရာမရှိဖြစ်မာစိုးလို့ ကျွန်းဘုရင်ကြီးက ကျွန်းမှာရှိတဲ့ အယ်မာဆိုတဲ့ရထားအိုကို ကျွန်းကထွက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဂျင်ဟာ အယ်မာနဲ့ရော ရထားမောင်းသမား လူးကပ်စ်နဲ့ပါ သံယောဇဉ်အရမ်းတွယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူ ကျွန်းကထွက်လာခဲ့ပါတယ် ဂျင်ဟာ သူဘယ်ကရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သူ့ဘဝသရုပ်မှန်ကိုသိချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ရထားကြီးအယ်မာ ရထားမောင်းသမားလူးကပ်စ်နဲ့အတူ စွန့်စားခန်းထွက်လာပုံတွေကို ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ အားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre :Action,Aventure,Family Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow =========================================================================================== App member only ဖြစ်လို့ app ထဲကနေအကောင့်နဲ့ ဝင်ကြည့်မှရပါမယ်။(app acc အတွက်မန်ဘာဝင်ထားပြီးသူများ viber - ...
IMDB: 6.3/10 2,139 votes
Dark Do or Die ##unicode Darkဇာတ်ကားမှာတော့ Sunnyနဲ့ သူ့မိန်းမMollyတို့က အိမ်ထောင်သက် ၁၂နှစ်ကျော်မှ သားအမြွှာလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ Sunny အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အဝေးရောက်နေချိန်မှာ Mollyတစ်ယောက် ဗိုက်နာလာလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။Mollyကလေးမွေးတော့မှာမို့ Sunnyတစ်ယောက်လဲ အလုပ်ကနေ ညတွင်းချင်းပြန်လာခဲ့ရတော့တယ်။အပြန်ခရီးကို လိုက်ပို့ဖို့အတွက် ကားစီစဉ်နေရင် အချိန်ကြာနေမှာမို့ သူတို့ရုံးက စိန်တွေသွားပို့မဲ့ Veerapaဆိုတဲ့ ဒါရိုက်ဘာမောင်းတဲ့ ကားကိုစီးပြီးဘဲ ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ ဘေးမဲ့တောတစ်ခုကို ဖြတ်သွားရင်းလမ်းမှာ Sunnyတို့စီးလာတဲ့ကားက မတော်မဆဖြစ်ကာ ချောက်ထဲပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။ကံကောင်းချင်တော့ ကားကချောက်ထဲ တန်းမကျသွားဘဲ ကျောက်ကမ်းပါးက သစ်ပင်မှာတင်နေခဲ့တယ်။Sunnyတစ်ယောက် သတိရလာတော့ သူတို့အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းရှာရပါတော့တယ်။လူသွားနည်းတဲ့ တောလမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် သူ့ဖုန်းမှာလဲ ဘေလ်မဆောင်ထားတဲ့အတွက် ဖုန်းခေါ်လို့မရဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ Sunnyတစ်ယောက် ချောက်ကမ်းပါးစွန်က ပြုတ်ကျလုနီးပါးကားထဲက အသက်ရှင်လျက်ထွက်လာနိုင်အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Darkဇာတ္ကားမွာေတာ့ Sunnyနဲ႔ သူ႔မိန္းမMollyတို႔က အိမ္ေထာင္သက္ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္မွ သားအႁမႊာေလးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔ Sunny အလုပ္ကိစၥနဲ႔ အေဝးေရာက္ေနခ်ိန္မွာ Mollyတစ္ေယာက္ ဗိုက္နာလာလို႔ ေဆး႐ုံတင္လိုက္ရတယ္။Mollyကေလးေမြးေတာ့မွာမို႔ Sunnyတစ္ေယာက္လဲ အလုပ္ကေန ညတြင္းခ်င္းျပန္လာခဲ့ရေတာ့တယ္။အျပန္ခရီးကို လိုက္ပို႔ဖို႔အတြက္ ကားစီစဥ္ေနရင္ အခ်ိန္ၾကာေနမွာမို႔ သူတို႔႐ုံးက စိန္ေတြသြားပို႔မဲ့ Veerapaဆိုတဲ့ ဒါ႐ိုက္ဘာေမာင္းတဲ့ ...
Dark Do or Die
Blood, Sweat and Lies (2018) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ "Blood Sweat and lies" ဆိုတဲ့ mystery thriller ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မယ်လီဆာဟာသူ့ချစ်သူ ကာတာနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက် လျော့နည်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မယ်လီဆာရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် အားကစားရုံမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ခေါ်သွားပါတော့တယ် မယ်လီဆာဟာအားကစားရုံမှာနည်းပြအက်ဒမ်ဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိလာပြီး သန်စွမ်းလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်မယ်လီဆာကလည်းအက်ဒမ်အပေါ်မှာ မှီခိုပြီးတော်တော်လေးလည်းယုံကြည်လာပါတယ် ဒါပေမယ့်အက်ဒမ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းထူးဆန်းလာပြီး မယ်လီဆာရဲ့ဘဝထဲမှာတော်တော်လေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်လာပါတော့တယ် အက်ဒမ်ဆိုတဲ့သူမှာဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲ မယ်လီဆာနားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဉ်းကပ်နေတာလား ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ "Blood Sweat and lies" ဆိုတဲ့ mystery thriller ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ မယ္လီဆာဟာသူ႔ခ်စ္သူ ကာတာနဲ႔လမ္းခြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယုံၾကည္ခ်က္ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ဒီလိုနဲ႔မယ္လီဆာရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ အားကစား႐ုံမွာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ေခၚသြားပါေတာ့တယ္ မယ္လီဆာဟာအားကစား႐ုံမွာနည္းျပအက္ဒမ္ဆိုတဲ့သူနဲ႔ေတြ႕ၿပီးေနာက္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈလည္းရွိလာၿပီး သန္စြမ္းလွပတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္မယ္လီဆာကလည္းအက္ဒမ္အေပၚမွာ မွီခိုၿပီးေတာ္ေတာ္ေလးလည္းယုံၾကည္လာပါတယ္ ဒါေပမယ့္အက္ဒမ္ဟာေနာက္ပိုင္းမွာတျဖည္းျဖည္းထူးဆန္းလာၿပီး မယ္လီဆာရဲ႕ဘဝထဲမွာေတာ္ေတာ္ေလးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာပါေတာ့တယ္ အက္ဒမ္ဆိုတဲ့သူမွာဘာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိေနတာလဲ မယ္လီဆာနားကိုရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိခ်ဥ္းကပ္ေနတာလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre: Action,Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Gatao 2: Rise of the King (2018) ##unicode Gatao2Rise Of The King က တော့ ၂၀၁၈ လောက်တုန်းကထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကားမှာလည်းလူဆိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ နယ်မြေလုပွဲတွေ နေရာလုပွဲတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ ဒီအပိုင်းမှာတော့ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေ ခေါင်းဆောင်ရဲ့လူယုံဖြစ်သူ ရန်ဟာနေရာအတန်အသင့်ရလာတဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သူကျန်းဆိုသူကမြောက်ပိုင်းနယ်မြေထဲမှာ လက်နက်အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတော့တယ် ပြဿနာတွေအားလုံးကဒီအပေးအယူကိုငြင်းပယ်ရာကနေ စတင်လာပါတော့တယ် ကျန်းဟာ ခေါင်းဆောင်ရန်ကိုဖြောင်းဖြမရတဲ့အဆုံးမှာမြောက်ပိုင်းနယ်မြေကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒီလိုအခက်အခဲတွေ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲကနေမြောက်ပိုင်းနယ်မြေကို အပြင်လူတွေမကျူးကျော်လာအောင် တားဆီးနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi Gatao2Rise Of The King က ေတာ့ ၂၀၁၈ ေလာက္တုန္းကထြက္ရွိထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီကားမွာလည္းလူဆိုးဂိုဏ္းေတြရဲ႕ နယ္ေျမလုပြဲေတြ ေနရာလုပြဲေတြကိုျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕လူယုံျဖစ္သူ ရန္ဟာေနရာအတန္အသင့္ရလာတဲ့အခ်ိန္္မွာပဲ သူ႔ရဲ႕မိတ္ေဆြေဟာင္းျဖစ္သူက်န္းဆိုသူကေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမထဲမွာ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းပါေတာ့တယ္ ျပႆနာေတြအားလုံးကဒီအေပးအယူကိုျငင္းပယ္ရာကေန စတင္လာပါေတာ့တယ္ က်န္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ရန္ကိုေျဖာင္းျဖမရတဲ့အဆုံးမွာေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမကိုသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ ဒီလိုအခက္အခဲေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြၾကားထဲကေနေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမကို အျပင္လူေတြမက်ဴးေက်ာ္လာေအာင္ တားဆီးႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Action, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
IMDB: 6.2/10 385 votes